Hunhu, Yepamberi kurudyi kona kona yekugaya musoro Vagadziri, Yakagadzirwa muChina - Dongguan Tuoyuan Precision Machinery Co LTD.
Imba > Zvigadzirwa > Machine chishandiso zvishongedzo > Side azvikuya musoro > Right kona milling musoro
Right kona milling musoro
Kona kona yekugaya musoro paramende runyorwa
1). 0-500kg: mweya yekutakura zvinhu
2). > 500kg: yekutakura zvinhu mugungwa
3). Sezvo pa mutengi racho
2). Polybag / Tissue Kuputira Pepa / Bubble bhegi / EPE furo / + Carton / Wooden kurongedza
3). Sezvinoenderana nevatengi zvinodiwa mune yakanaka mamiriro
Lead nguva:10 ~ 15 mazuva, sekuenderana nemutengi huwandu uye zvinodiwa
A5: Hongu, tinayo, asi kwete yakawanda kwazvo mudura.
A7: Ndine urombo, zvinonetsa kutora zvinhu nemari. Ndiri kutya kuti hatigone kubvuma iyo L / C kubhadhara mune yakadai nguva.
Q9: Zvakadii saizi yehuni kesi uye muchinjikwa uremu hwepakeji?
A9: Mabhokisi maviri ematanda akazara: imwe yemasikisi yekucheka muchina ine 2100 * 860 * 1760mm (L * W * H) uye kuyera kurema kwakatenderedza 700 KG; iyo imwe yemuchina wekucheresa earloop ine 1450 * 1000 * 1650mm (L * W * H) uye kuyambuka uremu zvinonzwika 400 KG; Yakazara imwe otomatiki ndege masiki muchina mutsara ndeye 1100KG package ine 2 matanda mabhokisi.
Hot Tags: Right kona yekugaya musoro, Hunhu, Yepamberi, Vagadziri, Yakagadzirwa muChina, CE
Horizontal azvikuya musoro
Gantry yekugaya musoro
Cnc machine centre divi azvikuya musoro